सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २: डिजाइन, सुविधाहरू र मूल्य Androidsis
यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २ हो, निर्माताको नयाँ स्मार्टब्यान्ड
बर्लिनमा आईएफए को संस्करण धेरै decaffeinated भइरहेको छ। कोविड १। महामारीको बावजुद यस प्रविधि मेलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो, तर प्रेसको उपस्थिति कम हुने भएकोले यस वर्ष कुनै विशेष उल्लेखनीय समाचार छैन। जे होस् सामसु .ले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २ पेश गरेर हामीलाई छक्क पारेको छ।
हामी यसको गतिविधि ब्रेसलेटको परिवारको दोस्रो पुस्ताको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन स्पष्ट उद्देश्यको साथ आउँदछ: शाओमी एमआई बैन्ड to को विकल्प बन्न। तर यो वास्तवमै गाह्रो हुने छ।
के यो स्यामसंग ग्यालेक्सी फिट २ यसको लायक छ?
सौन्दर्य तहमा हामी थोरै मात्र भन्न सक्छौं, किनकि यो नयाँ पहिरिनयोग्य डिजाइनमा कुनै उल्लेखनीय तत्व हुँदैन। अपेक्षित रूपमा यो जलरोधक हो, हो। टेक्निकल स्तरमा हामी रमाईलो विवरणहरू फेला पार्छौं, जस्तै १.१ इन्च एमोलेड स्क्रिन १२1,1 x २ 126 p p पिक्सलको रेजोलुसनको साथ जुन सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २ माउन्ट गर्दछ।
अर्कोतर्फ, हुड मुनि हामी सबै प्रकारका सेन्सरहरू पाउँछौं जुन हाम्रो शारीरिक गतिविधि अनुगमन गर्न सक्षम छन्: एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, हृदय गति सेन्सर। अवश्य पनि, दुर्भाग्यवश यसको जीपीएस छैन, यसको सीधा प्रतिद्वन्द्वीको साथ सबै भन्दा भिन्न तत्वहरू मध्ये एक हो शाओमी मी बैन्ड।।
यसका लागि धन्यवाद, हामी यी खेलहरूसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका मेट्रिकहरू थप्नका लागि पाँचवटा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू दर्ता गर्न सक्षम हुनेछौं। अर्कोतर्फ, यस स्मार्टब्यान्डमा ब्लुटुथ .5.0.० र वाइफाइ छ। सबै भन्दा राम्रो? यसको १159 m mAh ब्याट्री, जसले उत्कृष्ट स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्दछ। कुनै पनि भन्दा बढि, किनकि यो सामसु activity गतिविधि ब्रेसलेट १ 15 दिनसम्म रहन्छ।
अब, यो सियाओमी एमआई ब्यान्ड against को बिरूद्ध सानो कार्य गर्न सक्षम हुनेछ। कार्यक्षमताको स्तरमा, हामी सामसु Health स्वास्थ्य पहुँच भन्दा बाहिर उल्लेखनीय भिन्नताहरू फेला पार्न सक्दैनौं। र निर्माताले यस उत्पादनलाई एक पागल मूल्यमा बिक्रीमा राख्न चाहन्छ: सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २ को लागत52 यूरो हुनेछ। हो, समान विशेषताहरु भए पनि यसको प्रतिद्वन्द्वी भन्दा तीन गुणा बढी ...
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » अन्य उपकरणहरू » यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फिट २ हो, निर्माताको नयाँ स्मार्टब्यान्ड
Warhammer क्वेस्ट: रजत टावर पालो आधारित लडाई भूमि विश्वव्यापी सुरुवात संग